डा. बाबुराम भट्टराई भन्नुहुन्छ : पैसा अभाव भएको भए अस्पतालमा दानपात्र राख्नुहोस तर, सबै संक्र’मितको उपचार निःशुल्क गरौ ! – Nepal Online Khabar
काठमाडौ : पूर्व प्रधानमन्त्री तथा (जसपा)का संघीय परिषदका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले सरकार अहिलेको अवस्थामा को’रोना पी’डितको निःशुल्क उपचार गर्नबाट पन्छिन खोज्नु गैर’जिम्मेवार, चरित्र हिन भएको बताएका छन् ।
नागरिक सरकारको भरोसामा बसेका छन्, तर सरकारले नागरिक माथि यस्तो हर्कत गर्नु भनेको सरकार गैर जिम्मावर हुनु बताएका छन्। डा. भट्टराईले बुधबार (आज) बिहान सामाजिक स’ञ्जालमा एक ट्वीट गर्दै पैसा अभाव भएको भए अस्पतालमा दा’नपात्र राख तर सबै संक्रमितको उपचार निःशुल्क गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
जनताको ज्या’न जोगाउनका लागि सरकारले अरु सबै खर्च रोक्नुपर्ने भट्टराईको माग छ। यसरी लेखेका छन् डा.भट्टराईले, ‘कोरोना पी’डितलाई निःशुल्क उपचारको दायित्वबाट भाग्नु सरकारको गैर’जिम्मेवार चरि’त्रको पराकाष्ठा हो । यसले महामारी झन् वि’कराल बन्नेछ ।
यो पैसाको अभा’वले हैन, जनताको ज्या’न जो’गाउन अरू सबै खर्च रोके हुन्छ, भ्र’ष्टाचार/फजुल ख’र्च रोके पुग्छ । अस्पतालमा धनीले दिन चाहे दानपात्र राखौं तर सबैलाई निःशुल्क गरौं।
Prevराउटे समुदायलाई प्रदेश सरकारले मासिक दुई हजार भत्ता प्रदान गर्ने…हेर्नुहोस् ।
Nextओरालो लागेका प्रधानमन्त्री ओलीलाई आइलाग्यो फेरि अर्को ठूलो आपत ! देशकै यी चर्चित २३ जनाले एकसाथ निकाले यस्तो कडा विज्ञप्ती, बालुवाटारमा मच्चियो हलचल, अब के गर्लान ओली ?